Isticmaalka Casharrada: Talooyinka iyo Tabaha
Ka hor inta aadan bilaabin daawashada casharrada, fadlan soo maanguurso barnaamijkii ugu dambeeya ee Adobe Flash Player. Sida ugu fiican ee loo daawado, waxaanu kugula talinaynaa in aad u isticmaasho barnaamijka Chrome browser ahaan.
Loogu Talogalay Tababarayaasha
Casharradan waa khayraad muhiim ah oo ah kulamada tababarka. Hagitaanada falanqaynta ee cutub kasta waxay ka heli karaan isticmaalayaasha diiwaangashan halkan. Iska diiwaangeli halkan si aad u samaysato akown bilaasha ah oo gal.
Ma u baahanahay inaan iska diiwaangeliyo oo galo si aan u arko cutubyada?
Cutubyada waxaa la heli karaa iyadoon la isdiiwaangelin. Hase yeeshee, khayraadyada sida hagayaasha falanqaynta waxa keliya heli kara isticmaalayaasha diiwaangashan. Diiwaangelinta way fududahay oo waa bilaash!
Dhibcooyin ma ku helayaa fiirsashada casharradan?
Wakhtigan, ma bixinno dhibcooyinka xirfadaha ee daawashada casharradan.
Casharradan ma lagu heli karaa luqadaha kale?
Cutubyada waxaa lagu heli karaa Ingiriisi, Isbaanish, Soomaali iyo Fiidnaamiis.
Halkee ku baran karaa casharrada cusub markii ay diyaarka noqdaan?
Isku qor helitaanka warsidaha Waxbarashada iyo La socodsiinta ee emailka la iskugu soo diro ee: ilabsout@uw.edu.
Casharradan ma ku fiirsan karaa telefoonka gacanta ama qalabka tablet-ka ah?
Anigu uma isticmaalo Chrome browser ahaan. Ma ku daawan karaa casharradan browsarada kale sida Internet Explorer iyo Safari?
Haa, inkastoo laga yaabo inaad aragto in muuqaalka casharrada qaarkood ay u muuqdaan si kale.
Haddii aan qabo su’aal ku saabsan casharrada, yaan la xiriiri karaa?
Fadlan email noogu soo dir anaga ilabsout@uw.edu ama naga soo wac (206) 221-8047.
Sidee baan ula sii socon karaa waxyaabaha ugu dambeeya ee ka soo baxay cilmiga I-LABS?
Waxaan ku jirnaa warbaahinta! Nagala soco I-LABS Facebook iyo Twitter.